Kunyoresa Kuvhota Kotanga Muna Kubvumbi
Zimbabwe Electoral Commission head Priscilla Chigumba speaks to reporters and observers in Harare flanked by deputy Joyce Kazembe and her chief officer Utoile Silaigwana, July 30, 2018. She said two presidential candidates had violated electoral laws by c
Komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission, kana kuti ZEC, yazivisa kuti kunyoresa kwevanhu sevavhoti kwave kuzotanga asi sarudzo dzema by-elections hadzisi kuzoitwa pari zvino nekuda kwechirwere cheCovid-19.
Mukuru anoona nezvesarudzo muZEC, VaUtoile Silaigwana, vaburitsa gwaro vachizvisa kuti kunyoresa kweveruzhinji sevavhoti uko kwakambenge kwamiswa nekuda kwechirwere cheCovid-19, kwave kuzotanga musi waKubvumbi 1 asi sarudzo dzema by-elections hadzisi kuzoitwa panguva iyi senzira yekuedza kutevedzera mirau yakatarwa nehurumende yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere ichi.
VaSilaigwana vakurudzira vose vanoda kunyoresa sevavhoti kana kuchinja kwavanovhotera kuti vaende kumahofisi ekomisheni yavo mumatunhu avagere kuti vanonyoresa sevavhoti kana kuchinja kwavanoda kuzovhotera.
Vakafanobata chigaro chemutauriri webato reMDCT, VaWitness Dube, vati vanotambira danho ratorwa neZEC vachiti vave kutoita gadziriro dzekuti vapinde musarudzo kana ZEC ichinge yatara mazuva achaitwa sarudzo.
Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance, VaClifford Hlatzwayo vapomera ZEC mhosva yekushandiswa nebato reZanu PF kuzadzisa zvido zvebato iri kuburikidza nekuramba ZEC yakamisa kuitwa kwesarudzo dzema by-elections.
Asi VaSilaigwana vaudza Studio 7 parunhare kuti sangano rinoshanda rakazvimirira risingatevedzere zvido chero zvaani zvake.
Mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZanu PF, VaTafadzwa Mugwadi, vati bato ravo riri kutambira danho ratorwa neZEC vachiti havatyi kuti sarudzo dziitwe chero ripi zuva sezvo vachiti vane rutsigiro rweveruzhinji.
Zvichakadai, mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition, VaMarvelous Khumalo, vaudza Studio7 kuti hapana chinotadzisa kuti sarudzo dziitwe sezvo nyika yakavhurwa uye vanhu vachitevedzera zvakatarwa nehurumende pamwe nesangano reWorld Health Organization kuti zviitwe kuderedza mukana wekupararira kwechirwere cheCovid-19.
Nzvimbo dzakawanda munyika dzakasara dzisina vamiriri muparamende zvichitevera kudzingwa kwakaitwa nhengo dzeMDC Alliance muparamende neMDC-T nebato rePDP pamwe nemakanzura mumakanzuru akasiyana-siyana zvichitevera kusawirirana kwezvikwata zveMDC pamwe nekufa kwakaitawo dzimwe nhengo dzeparamende kumapato ose ane nhengo dziri muparamende.